Web Development ကို ဘယ်လိုလေ့လာကြမလဲ? - The Khant Digital
Web Development ကို ဘယ်လိုလေ့လာကြမလဲ?
(Self-study အတွက်ကို အဓိကဖော်ပြပေးထားပါတယ်။)
Web Development အကြောင်းရယ်၊ Web Development ကို ဘယ်ကနေ စလေ့လာသင့်တယ် ဆိုတာရယ်ကို ရှေ့ post နှစ်ခုမှာ ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ post မှာတော့ Web Development ကို ဘယ်လိုလေ့လာကြမလဲ ဆိုတာကို တိုတိုနဲ့လိုရင်းရောက်အောင် ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။ ဘယ်လိုလေ့လာကြမလဲဆိုတာနဲ့အတူ ဘယ်မှာလေ့လာမလဲဆိုတဲ့အချက်ကလဲ အရေးကြီးလှပါတယ်။
w3schools.com ကိုတော့ ကျွန်တော် highly recommend ပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဒီ website ကပဲစလေ့လာခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့တကယ်ကို အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။ Web Development နဲ့ပတ်သတ်ရင် Frontend ကိုရော Backend ကိုပါ တစ်နေရာတည်းမှာလေ့လာလို့ရပါတယ်။ တစ်ချို့ framework တွေကိုလည်း w3schools မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ English စာအသုံးအနှုန်းတွေကလည်းလွယ်ကူတော့ English reading skill အနေနဲ့ အရမ်းမြင့်နေစရာမလိုပါဘူး။ သေသေချာချာ လေ့လာမယ်ဆိုရင် ၂ ပတ်လောက်အတွင်းမှာတင် HTML နဲ့ CSS ကိုကောင်းကောင်းနားလည်နိုင်ပါတယ်။ w3schools.com လိုပဲ နာမယ်ကြီးပြီး လေ့လာသူများတဲ့ codecademy.com နဲ့ freecodecamp လည်းရှိပါသေးတယ်။
Website တွေမှာလေ့လာမယ်၊ YouTube မှာ video တွေကြည့်မယ်။ ဒါ့အပြင် Web Development နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ စာအုပ်တွေကိုလည်းဖတ်နိုင်ပါတယ်။ English လိုဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့ Web Development အတွက် စာအုပ်တွေက ဒုနဲ့ဒေးပါ(စာအုပ်အများစုက language တစ်ခုချင်းစီကိုအလေးထားဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်)။ ဒါမယ့် မြန်မာလိုတော့ ရှားပါတယ်။ မြန်မာလိုလည်းဖြစ်၊ PHP Web Application အတွက် အစကနေအဆုံးထိ ရှင်းပြထားတာလည်းဖြစ်၊ frontend ရော backend အတွက်ပါ language တွေရဲ့ ရှင်းလင်းချက်လည်းပါတဲ့ ဆရာ အိမောင်ရဲ့ Professional Web Developer စာအုပ်ကတော့ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပါ။ စာအုပ်ကို ဒီ https://goo.gl/QipEqQ လင့်ကနေသွားပြီး free download ရယူနိုင်ပါတယ်။ အပြင်မှာလည်း ငွေ ၁၀၀၀၀ ကျပ်ပေးပြီး ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
အပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့တာတွေက သင်တို့အတွက် web development ကို self-study လုပ်ပြီး စတင်လေ့လာဖို့ အသုံးဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ တခြား သိချင်တာတွေရှိရင်လည်း မေးမြန်းနိုင်သလို အကြံပေးချင်တာရှိရင်လည်း ကြိုဆိုပါတယ်။
self-study လုပ်တဲ့အခါ ကိုယ်မသိတဲ့ error တွေကို ဖြေရှင်းရတာကတော့ တော်တော်လေးကိုမလွယ်ပါဘူး။ Facebook group တွေမှာ၊ Stackoverflow တို့ Quora တို့လို website တွေမှာ လည်းကိုယ်မသိတာရှိရင်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်။
Self-study တစ်ခုတည်းလုပ်တာထက် အပြင်မှာလည်း သင်တန်းတက်ဖို့ကို ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ သင်တန်းတက်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်မသိခဲ့တဲ့အရာတွေကိုသိလာရမှာ ဖြစ်သလို၊ တချို့ သိပြီးသားဖြစ်သော်လည်း မေ့နေတာတွေကို ပြန်နွှေးသလိုဖြစ်မှာပါ။ ဆရာ၊ ဆရာမတွေဆီက သူတို့သင်ပေးတဲ့အသစ်အသစ်တွေကိုရနိုင်သလို၊ သူငယ်ချင်းတွေဆီကလည်း မတူညီတဲ့အတွေးအခေါ်တွေကိုရနိုင်ပါတယ်။ project တွေလုပ်တဲ့အခါ သင်တန်းမှာ အဖွဲ့(team) တွေခွဲပေးလေ့ရှိတာကြောင့် teamwork ကိုလည်းတက်စေသလို၊ web developer အချင်းချင်း network လည်းရစေပါတယ်။
အပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့တာတွေကတော့ Web Development ကိုဘယ်လိုလေ့လာရမလဲ၊ ဘယ်ကလေ့လာရမလဲဆိုတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အတွက် ဒီ post ကအသုံးဝင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ Web Development ကိုလေ့လာနေတဲ့ အသိမိတ်ဆွေတွေရှိရင်လည်း post လေးကို share ပေးဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
← Prev: Web Development ကိုလေ့လာဖို့ ဘာတွေလိုအပ်သလဲ? Next: 𝗧𝗼𝗽 𝟭𝟬 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝗶𝗲𝘀 𝗶𝗻 𝗠𝘆𝗮𝗻𝗺𝗮𝗿 →